Shiinaha Soosaarayaasha Hilibka Hilibka la kariyey iyo alaab-qeybiyeyaasha | DHAMMAAN
Xawaaraha qaboojinta degdegga ah, Waxay qaadataa oo keliya 30 daqiiqo si ay u qaboojiso 100 ℃ si ay uga hooseyso 10 ℃. Kuleylka heerkulka qabow ee xarunta iyo dusha sare ee cuntada. Looma baahna shuruudo gaar ah oo ku saabsan cabirka, muuqaalka iyo qaabka isku-xirnaanta ee alaabooyinka MAYA ”wasakhda labaad” ee loogu talagalay qaboojinta qolka birta ah ee birta ka samaysan ee gebi ahaanba go'doonsan. Si dhakhso leh uga gudub xaddiga heerkulka ee 25-50 ℃
taas oo aad ugu habboon taranka bakteeriyada.
AllCOLD vacuum qaboojiyeyaasha hadda waxaa si ballaaran loogu isticmaalaa qaboojinta warshadaha cuntada ee la kariyey sida qaboojinta hilibka, digaagga, bariiska iyo waxsoosaarka digirta laga sameeyo, khudradda, rootiga, keega iwm. Taxanaha heerkulka caadiga ah si loo kariyo cuntada illaa 25 ℃ ~ 30 ℃, taxanaha heerkulka hoose ee heer kulka ugu dambeeya wuxuu ka yaraan karaa 10 ℃.
1. Tikniyoolajiyadda PCM-ga qaaska ah waxaa lagu qaatay dabinka qabow, si si weyn loogu wanaajiyo awoodda qabashada biyaha ee ka dhanka ah burburka ilaa qaboojiyaha iyo nidaamka faakuumka ee ka imaanshaha uumiga tirada badan ee cuntada la kariyey.
2. Qaabdhismeedka tuubbada birta ah ee aan xarka lahayn ayaa lagu ansixiyay dabinka qabow si loo hagaajiyo isku halaynta qaybaha muhiimka ah waa magac caalami ah oo caan ah.
3. Tikniyoolajiyad xakameyn cadaadis faaruq ah oo khaas ah si loo xalliyo dhibaatada ku fidaya qaboojinta alaabada dareeraha ah oo leh PLC horumarsan iyo nidaamka shaashadda taabashada, Calaamadu waxay muujineysaa howlgalka iyo xaalada socodsiinta, cad oo ku habboon.
4 Hawlgallada kaladuwan iyo 'cryptoguard' ayaa lagu qaatay hawlgalka qalabka:
Hawl-wadeenka: oo keliya mishiinka keystroke (shid ama dami)
Farsamo yaqaan wax soo saar: kaliya dejinta xuduudaha waxqabadka.
Injineer: qalabka qalajinta, dayactirka iyo cilad garashada.
5. Nidaamka hawlgalka otomaatiga ah iyo gacanta, socodsiinta iyo hawlgalka mashiinku waa mid aad u jilicsan oo lagu kalsoonaan karo.
6. Maaddada Wacuum chamer waa SUS304 ahama, oo loogu talagalay iyadoo loo eegayo shuruudaha GMP.
Hore: Cunnooyinka Steamed Vacuum Qaboojiyaha